မီမီခိုင် – Hlataw.com
ဒီနေ့ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း နေ့လည် ထမင်းစားချိန်မှာ အပြင်ထွက်မစား .. ။ ပြီးခဲ့သောနှစ်ရက်လောက် မှာ ပွဲဆက်တွေ များခဲ့ ပြီး အစားတွေ မဆင်ခြင်ခဲ့ ။ ပြန်လျော့ရမည် ..။ မနက် ကထည့်ခဲ့တဲ့ သင်္ဘောသီး နဲ့ စပျစ်သီး ဘဲ ဆာမှ စားတော့မည် လို့ စဉ်းစားထားသည် ။… သက်သက် . .နင့်ကို . .ခင်ချိုအုံး ပြောပြတဲ့ ငရဲအကြောင်း ဆိုတာ ပြောပြပါအုံး . ….ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း သူမ ရုံးခန်း အပြင်ဘက် မှာ ထမင်းဘူး ထိုင်စားနေကြတဲ့ စာရေးမလေး နှစ်ယောက်စကားသံကို ကြားလိုက်ရ သည် . .။ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရုံးခန်းထဲမှာ ရှိနေတာကို မသိကြဘူး . .။ အင်းလေ . .သူမ သည် နေ့တိုင်းနေ့လည်စာ ကို အပြင်မှာ ထွက်စားတတ်တာကိုး . .။ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်းတို့ ရုံး ရဲ့ အနီးအနား မှာစားသောက်ဆိုင်တွေ က စုံလှ သည် .. ။ ငရဲအကြောင်း ဆိုလို့ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း စိတ်ဝင်စားသွားသည် ။ဖတ်လက်စ အီးမေးလ် ကို ဆက် မဖတ်ဘဲ နား စွင့်ထားမိ သည် . ။ ငရဲ ဆိုတဲ့ ကောင်လေး ကဒေါ်မီမီခိုင်မင်း တို့ ရုံး က ယာဉ်မောင်း ပါ . .။ငရဲ ရဲ့ ပုံစံ က ခပ်မိုက်မိုက် လေး .. ။ သူ့ အကြည့်တွေ ကလဲ ရဲတင်း သည် . .။ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း လို ရာထူးကြီးတဲ့ အရာရှိမ ကိုတောင် သူ ကြည့်တဲ့ ပုံ က ပြီတီတီ နဲ့ . .။ သူမ ရဲ့ရင်တွေ တင်တွေ ကို စူးစိုက်ကြည့်တာ ရ ငရဲ ။ သူ့ နံမည် အရင်း က ရဲမင်း ပါ . .။ သူငယ်ချင်းတွေ က ငရဲမင်း လို့ နောက်ပြောင်ပြီး ခေါ်ကြ သည် .. ။ ကာလရွေ့လျောလာတော့ သူ့ ကို ငရဲ လို့ လူတကာ က ခေါ်ကြတော့တာဘဲ . .။သူ ကိုယ်တိုင်ကလဲ ငရဲဆိုတဲ့ နံမည် ကို နှစ်ခြိုက် သည် ..။ သူက ကိုယ်သူ ငရဲလို့ဘဲ သုံးနှုံး သည်။ငယ်ငယ်ကထဲ က ရပ်ကွက်ထဲမှာ ထီကနဲဆို ငရဲ ဘဲ . .။ကျောင်းမှာလဲ ငရဲ ကို လူတိုင်း သိ သည် . ။ကောင်းသော သိခြင်းတော့ မဟုတ်ဘူး ..။ လူဆိုးလေးအဖြစ် သိကြတာ .. ။ ငရဲရဲ့ မိဘတွေ သည်ငရဲကြောင့် အရှက်တကွဲ အကျိုးနဲ အမြဲ ဖြစ်ကြရ သည် . .။ ငရဲ သည် မိန်းမ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငယ်ငယ်ကထဲ က နံမည်ပျက် သည် . ။ ကျောင်းက မိန်းကလေး အိမ်သာကို ချောင်းလို့ ကျောင်းထုတ်ခံရတာ မိဘများ အလိုက်ကောင်းလို့ . .ကျောင်းပြောင်း လိုက်ရတာ နဲ့ ပြီးသွား သည် . .။ ငယ်ငယ်ထဲ က ရီးစားထား သည် ..။
လူပျိုပေါက် အရွယ်မှာညဘက်ကြီး .သူ့ရီးစား ကောင်မလေး ရဲ့အိပ်ခန်းထဲ ..မိလို့ အမှုကြီး သွား သည် . .။ဆယ်တန်း..သုံးခါကျသော..ငရဲသည်ကျောင်းဆက်မတက်တော့ဘဲ..အလုပ်ထွက်လုပ်သည် ။ပထမဆုံး ငရဲ စာအုပ်ချုပ် လုပ်ငန်း တခု မှာ ၀င်လုပ် သည် . ။ မျက်နှာချိုပြီး ဖင်ပေါ့သော ငရဲ ကို .ပိုင်ရှင် က သဘောကျ သည် .. ။ ငရဲ ကို အားကိုးလာပြီး အလုပ်သမားတွေကို ..တာဝန်ယူ ကြီးကြပ်ရတဲ့ စူပါဗိုင်ဆာ အဖြစ် တိုးမြှင့်ပေးလာ သည် . .။ သည်မှာတင်ဘဲ ငယ်ကျင့်မပျောက်ဘဲ ငရဲဇာတိပြလာ သည် ။ ပိုင်ရှင်သူဌေး ရဲ့ သမီး ရေချိုးတာ ကို ချောင်း သည် ..။ မိသွားတော့အလုပ်ပြုတ်သွား သည် ..။အမေဘက် က အမျိုးတွေ အဆက်ကြောင့် သည်ရုံးမှာ ယာဉ်မောင်းအလုပ် ရ သည် . .။ နောက်ကြောင်းရာဇ၀င် မလိုက်ဘဲ အတွင်းလူ က ထောက်ခံလို့ ရတာ ဖြစ်သည် . ။နောက်ကြောင်းရာဇ၀င် သာ လိုက်လို့ကတော့ ငရဲမှာ က အမှုဟောင်းတွေက တပုံ ကြီး . ..။သည်ရုံးရောက်တာ မကြာသေး ..ငရဲ ရီးစားရ သွား သည် ..။မိန်းမ.၀ါသနာကြီးသော ငရဲ သည် ဖင်ကြီးကြီး နဲ့ ခင်ချိုအုံး ကို တွေ့သောအခါ အရမ်း သဘောကျပြီး..ခင်ချိုလွင့် ကို ချဉ်းကပ် လေတော့ သည် . .။ . .ခင်ချိုအုံး..သည် ရုံးအလုပ်နဲ့အပြင်အမြဲသွားရသောကြောင့် .ရုံးကားမောင်းသော ငရဲနဲ့ အနေနီးစပ်တာကြောင့် ..မိန်းမများကိုကျအောင်.အပြောကောင်းတဲ့ငရဲ နဲ့ ညိကြလေ သည် .. ။ ပဲခူး ကို ပစ်ကနစ် ထွက်ကြ ရင်း . .ငရဲနဲ့ ခင်ချိုအုန်း ခဏ လူကြားထဲကပျောက်သွား သည် ..။ ငရဲ သည် အကိုင်အတွယ် ရဲ သည် . .။ ကြမ်း သည် ..။မိန်းမလိုး ကျွမ်း သည် .။ခင်ချိုအုံး ကို သူ့ အသိတယောက် ရှိတဲ့ ဆိစက်တခု ကို ခေါ်သွား သည် . .။တနင်္ဂနွေနေ့မို့ ဆီစက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိ .. ။ ဂိုဒေါင်ကြီးထဲမှာ ဖြစ်သလို . ရအောင် လိုးလိုက် သည် . .။ ခင်ချိုအုံး သူ့ ကိုကြိုက်သွား သည် . .။ ဘူးတရာ ပိတ်လို့ရမယ် . ပါးစပ်တပေါက် ကို ပိတ်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲ သည် .. ။ခင်ချိုအုံး ငရဲ ရဲ့ လီးကြီးတာ မြိုသိပ် မထားနိုင်ဘူး .. ။ တဆင့်. .တဆင့်နဲ့.ငရဲလီးကြီးတာ.ဒေါ်မီမီခိုင်မင်းတောင် သိနေပြီ .. ။ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း သည် သူက ရုံးကားကိုမောင်းသော ယာဉ်မောင်း တင်ထွန်းအောင် သည် အလုပ်အမြဲနောက်ကျတာကြောင့် ..သူ့ကို အပြစ်ပေး အရေးယူရတာကြောင့် ယာဉ်မောင်းလိုလာတာမို့ငရဲ ကို သူ့ ယာဉ်မောင်းအဖြစ် ခေါ်လိုက်ရ သည် . .။ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း သည် ဒေါ်ရှေ့ကတပ် ပြီး ခေါ်ကြရပေမဲ့ အသက်အားဖြင့် သိပ်မကြီးလှသေးတာကြောင့် လက်အောက် ၀န်ထမ်းတွေ က… မမ … လို့ဘဲ ခေါ်ဆိုကြလေ သည် .. ။… မမ ကျနော် ရောက်ပါပြီ . …. သူမ ရှေ့မှာ ငရဲ လက်နှစ်ဘက် ရှေ့မှာယှက်ပြီးရိုကျိုးကျိုး ခေါင်းလေးငုံ့ကာ လာပြောသည် .. ။ဒီလိုလုပ်ပြလို့ ဒီကောင်လေး ကို သူမ မယုံ . .။ သူမ ကားပေါ်က အဆင်း တဏှာခိုးတွေ လျံနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ သူမ ရဲ့ အနောက်ပိုင်း ဖင်တုံး တွေ ရဲ့တုန်ခါမှုတွေ ကို စူးစူး ၀ါးဝါး ကြည့်နေတတ်သည် ။မနက်တိုင်း ရုံးသွားရန် ငရဲက ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ကို အိမ်မှာ လာခေါ်ရ သည် . .။
ငရဲ ကို သူမ တွေ့တိုင်းသက်နွယ်ဦး နဲ့ ဆွေမမခိုင် တို့ ပြောဆိုနေတုံး က စကားသံတွေ ကို ပြန်လည်ကြားယောင်မိလေ သည်. .။ ငရဲ ရဲ့ လီးကြီး တဲ့ အကြောင်း . .။ ဒီအခါမှာ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရဲ့ မျက်လုံးတွေ ဟာ ငရဲ ရဲ့ ကိုယ်အရှေ့ဘက် အောက်ပိုင်း ကို အလိုအလျောက် ရောက်သွားမိ တတ်လို့ ချက်ချင်း မျက်လုံး လွှဲဖယ်ပစ်ရ သည် ..။ လုံချည်အပေါ်ကနေ ဘာမှလဲ မတွေ့နိုင် မသိနိုင်ရက် နဲ့ ဘာကြောင့်များ ဒီမျက်လုံးတွေက ရောက်ရောက်သွားရပါလိမ့် ဆိုပြီး ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း သူမ မျက်လုံးတွေ ကို အပြစ်တင်မိ သည် . .။ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရုံးရောက်ခါနီး..ကားမောင်းနေသော င၇ဲ ကို စကားပြောသည် ။… ငရဲ . ……. ဗျာ . ..မ မ …… မင်း လာမဲ့ စနေနေ့ အားလား . ……. အား ပါတယ် . .မမ . .ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ဟင် . ……. အေး . .အိမ်မှာ အ လုပ် လုပ်စရာ နဲနဲ ရှိလို့ လာ နိုင်မလား .. ……. ဟုတ်ကဲ့ မ မ …ရပါတယ် . .ဘယ်အချိန် လာရမလဲ . ……. မနက်ပိုင်းပေါ့ . ……. ဟုတ်ကဲ့ ကျနော် လာလုပ်ပေးပါမယ် . …. ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ကားပေါ်က အဆင်း ..မသိမသာ စောင်းငဲ့ကြည့်လိုက်တော့ သူ့အနောက်ပိုင်းဆတ်ဆတ်ခါနေတဲ့ စွင့်ကားတဲ့ တင်တွေ ကို စားတော့ဝါးတော့ မတတ် စူးစူးဝါး ၀ါးကြည့်နေသောငရဲ ကို တွေ့လိုက်ရပေ သည် . .။တကယ်တော့ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း သည် အပျိုကြီး မမ ဆိုပေမဲ့ ယောက်ျား နဲ့ကြုံဘူး အတွေ့အကြုံ ရှိသည် . .။ ..လိုးဘူး ..သည်. .။ သူမ သည် ယခုအခါ ရုံးမှာ ရာထူးကြီးကြီးနေရာ ရောက်နေတာကြောင့်..တော်ရုံ ယောင်္ကျား ကို လင်မတော်ချင်လှ . .။ သူမ ထက် ထက်မြက်ပြီးဝင်ငွေမြင့်.. . .ရာထူးကြီးမြင့်မှဘဲ လင်အဖြစ် ရွေးချယ် လိုတာ ကြောင့် သူမ မှန်းထားတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုး..မရနိုင်ဘဲ . .အပျိုကြီး မမ ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်လာပေ သည် . .။လူရှေ့ မျာ ဟန်ဆောင် ကာနေရပေမဲ့ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း စိတ်ထဲမှာတော့ ငရဲလို လူနံပိန်ကျွဲဂျိုလိန် ခါးအားကောင်းကောင်း နဲ့ တကယ် လိုးပေးနိုင်မဲ့ ကောင်ငယ်လေး တယောက် နဲ့နင်လားငါလား ..ရင်ဆိုင် နွှဲပစ်လိုက်ချင် သည် .. ။ယောင်္ကျား ရဲ့ လိုးတဲ့ အရသာ ကို ခံဘူးတာကြောင့် စိတ်က တောင်းလာတဲ့ အခါ . .ခံပစ် ကုန်းပစ်လိုက်ချင်တဲ့ စိတ် သူမမှာ ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပေါ်နေသည် . .။ခင်ချိုအုံး ။ … မျက်စိထဲက ထွက်ကို မထွက်ဘူး . .ကိုယ့်အသွေးအသား ရိုးတွင်းချင်ဆီ အထိ . ….ခင်ချိုအုံး သည် … စွဲနေပြီ . …. ဆိုတဲ့ သီချင်း ကို တိုးတိုးလေး ငြီး ရင်း ရုံး ထဲကို ၀င်လိုက် သည် . .။ခင်ချိုအုံး ဒီနေ့ ရုံးကို လာတော့ သူမ ရဲ့ ပေါင်ကြား က ပိပိ ကကျိန်းစပ်နေဆဲ . .။ မနေ့ ညနေ က ငရဲပေါ့ . .။ တအားဆောင့်ဆောင့် လိုးတာ . .။
သူ့ လီးကလဲတကယ့်စူပါဆိုက်ကြီး ။လိုးအားကလဲ သန်ပါဘိနဲ့ . .။ခင်ချိုအုံး . .သုံးချီလိုးတာ ငါးချီ ပြီးရ သည် . .။ဘာဂျာကလဲ ရေရေလည်လည်ကိုင်ပေး သည် . .။ငရဲ နဲ့ ပဲခူးက ဆီစက်မှာစပြီးလိုးမိသွားကထဲကခင်ချိုအုံးသည် . .အရူးအမဲသားကျွေးမိသည်ဆိုသလိုဘဲ .. ငရဲ လိုးတာကို . .ငရဲ လီးတုတ်တုတ်ကြီး ကို စွဲ သွားသည် . .။ အခွင့်သာတိုင်း ကုန်းဖြစ်သည် .. ။ ဒါတောင် အဲဒီတုံး က ကြမ်းပြင်တွေ ရော စားပွဲတွေရောက ဖုံတွေနဲ့ညစ်ပေနေတာကြောင့် မော်တော်ဆတ် . .မတ်တပ် ဆော် ရတာ . .အဟီး . .။ ခင်ချိုအုံး ဆီစက်ထဲလိုးကြတာကို ပြန် စဉ်းစားတော့ ဖြန်းကနဲ ကြက်သီးတွေ ထ မိပြန် သည် . .။ ခင်ချိုအုံး သည်ကျောင်းသူဘ၀ မှာ လင်နောက်လိုက်ဘူး သည် . .။ခင်ချိုအုံး ကို ခိုးပြေးခဲ့တဲ့ ကောင်ကလဲ တကယ့်ငဖြုတ် . .။ ကာမရာဂ…အား ကြီးတဲ့ ကောင် . .။ သူ့ နံမည် က ဇေယျာ တဲ့ ..။ ဖေယျာကြောင့်ခင်ချိုအုံး..ကာမ.အတွေ့အကြုံ စုံခဲ့သည်..။ ဇေယျာ သည် ခိုးပြေးသော တပတ် အချိန် မှာနေ့တိုင်း တနေ့ ကို ခုနစ်ချီ အနဲဆုံး လိုး သည် . .။ဒါကြောင့် ခင်ချိုအုံး သည် ၀ါရင့်နေပြီ ..။ဇေယျာ ဆိုတဲ့ ကောင် က ပုံစံ အမျိုးမျိုး နဲ့ လိုးခဲ့လို့ ခင်ချိုအုံး သည် လိုးနည်းမျိုးစုံကိုလဲကျွမ်းနေသည် . .။..သူမ အတွက် လိုးတာဟာ အဆန်းမဟုတ်တော့ . .။သူမဆာလောင်တောင့်တချိန်မှာ ငရဲ နဲ့ တွေ့တော့ ငရဲ ကို ပေးလိုးလိုက်တာ ဖြစ် သည် ..။လိုးလက်စရှိတော့လဲ . .အမြဲချိန်းလိုးလေ သည် .. ။ သက်နွယ်ဦး က ခင်ချိုအုံး ကို သတိပေးသည် . .။ … ယူ့ဘဲလေး က အရာရှိမမ ကိုရှိုးတဲ့ပုံက မရိုးဘူး . .။သူ့ အကြည့် က မမကြီး . .အ၀တ်တွေ ကို ဖေါက်ထွင်းမြင်နေရတဲ့ ပုံလေ. .မမကြီး ထမိန်မှာ ငရဲ ရဲ့ မျက်စိတွေ ငြိကပ်ပြီး ပါသွားကြတယ် လို့ ထင်ရတယ် . …. တဲ့ . .။ ဟွန်း . .ကြားခါစကတော့ သ၀န်တိုမိသလိုဘဲ . .။ နောက် ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ ငရဲ နဲ့ဆက်ဆံ ထိတွေ့ ညိစွန်းခဲ့ကြပေမဲ့ ချစ်ခဲ့တာမျိုး မဟုတ်ဘူး . .။သေသေချာချာ စဉ်းစားတော့လဲ သူငရဲ ကို မချစ်မိ . .။ ကာမ စိတ် နဲ့ သွေးသား ဆန္ဒ ကို ဖြေဖျောက်ကြ တာဘဲ ဖြစ် သည် . .။ဒါကြောင့်ငရဲ ကို ဘာမှ မဟန့်တား . .။ စိတ်ထဲမှာ ဘ၀င်လေဟတ်သလို ဂိုက်ပေး . .ပဲများနေတဲ့ အရာရှိမမဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ကို ငရဲ ရအောင် ဖန်နိုင်ရင် ကြည့်ကောင်းမဲ့ ပွဲ ဘဲ လို့တောင် ထင်မိ သည် . .။ယာဉ်မောင်းကောင်ငယ်လေး တယောက် နဲ့ အရာရှိမမ တို့ ရဲ့ အပြာ ဇာတ်လမ်း က စိတ်ဝင်စားစရာမဟုတ်လား ။ဂျာနယ်ထဲ ထည့်ရေးလိုက်ရလို့ကတော့ အဲဒီဂျာနယ် ..ရောင်းကောင်းသွားမယ်…။လူတွေ က အညှီအဟောက်သတင်း ဆို သိပ် ဖတ်ချင်ကြတာလေ . . သောကြာနေ့ ည . .။ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ဥာဏ်များနေသည် . .။ သူမ သည် သတင်းကြားထားသော ငရဲလီးကြီးတာ ကို အတည်ပြုချင်သည်. .။ သူမ မျက်စိ နဲ့ ကိုယ်တိုင် တွေ့ချင် သည် .. ။
ထို့ကြောင့် ဥာဏ်များနေတာ ဖြစ်သည် ။ ဘယ်လိုဥာဏ်များနေသလဲဆိုတော့ . .။မနက်ဖန် ငရဲကို ခြံထဲ မြေတွင်းတူးရန် .အကူ ခေါ်ထား သည် .. ။ ပြီးရင် ငရဲ ကိုယ်မှာပေကျံတာတွေကို အကြောင်းပြုပြီး ငရဲကို သူမ အိမ်အောက်ထပ် က ရေချိုးခန်းမှာ ရေချိုးခိုင်းမည် . .။ခုညထဲက ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း သည် အဲဒီ ရေချိုးခန်းမှာ အပေါက်ငယ်တခု ကို ဖေါက်ထား ပါ သည် . .။ငရဲရေချိုးမဲ့နေရာ ကို မြင်သာမဲ့ ချောင်းဖို့ အပေါက် ဖေါက်ထားလိုက် သည် . .။အင်း . .ငရဲ ရဲ့ လီးတုတ်တုတ်ကြီး ကို တွေ့ရချည်သေးရဲ့ . .။ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း သောကြာနေ့ ညလဲဖြစ်တော့ မနက် စောစော ထစရာမလိုလို့ အွန်လိုင်း မှာ စာဖတ်လိုက်– ဆိုတဲက အပြာဆိုက် ကိုသွား ပြီး လီးတန်ကြီးတွေ ကို ကြည့်လိုက် နဲ့ လုပ်ရာ ကသောကြာ နဲ့ စနေ တိုင်း သူ နဲ့ ချပ်တင်း လုပ်နေကျ ဘလူး လပ်ဗါ ဘလူး လပ်ဗါ ဆိုတဲ့တယောက် များ ရောက်နေပြီလား ဆိုပြီး သွားကြည့် လိုက် သည် .. ။ ဘလူး လပ်ဗာ ရှိနေသည် . .။ဘလူးလပ်ဗါ က စင်ကာပူ က တဲ့ . .။ အိုင်တီ တက်ကနစ်ရှင် တဲ့ . .။ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရဲ့ချပ်တင်းလုပ်တဲ့ နံမည် က ရန်ကုန်ဂဲစ် …။သည် နံမည် ယူထားတာ ဘယ်သူမှ မသိဘူး . .။ သူမ အိမ် ကွန်ပြူတာ နဲ့ တယောက်ထဲ ရှိတဲ့အခါညပိုင်း သူမ ချပ်တင်း လုပ်တဲ့ အခါ သုံးတာ ဖြစ် သည် . .။ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း လှမ်း နုတ်ဆက်လိုက် သည် .. ။ … ဘယ်လိုလဲ . .နေကောင်းလား . . … … ကောင်းပါ့ဗျာ . .ကလေးမေ၇ာ . …. … ကောင်းပါ့ ရှင် . .ရောက်နေတာ ကြာပြီလား . …. … မကြာသေးပါဘူး . …. … ဘာထူးသေးလဲ . .ရီးစား ရပြီလား . …. … ဟင့်အင်း . .မရသေးဘူး . …. … မရှာဘူးလား . …. … ရန်ကုန်မှာ လာရှာမလို့ . …. … ရှာလေ . .သိပ်မှ မဝေးတာ . .လာချင်ရင် အနီးလေး . …. … ကလေးမ က ကူညီမှာ လား . …. … ဘာကို ကူညီရမှာလဲ . …. … ရီးစား ရှာဖို့လေ . ……. ဘယ်လို ကူရမှာလဲ . ……. ရီးစား ရဖို့လေ . …. … သူ့ ဟာ သူ လုပ်ရမဲ့ ကိစ္စဘဲ လေ . ……. ကလေးမ နဲ့ တွေ့ချင်တာ .. …… ဟုတ်လို့လား . ……. ဟုတ်တယ် . .တွေ့ချင်တာ အရမ်းဘဲ . ……. တကယ်လား . ……. အင်း . .ကလေးမ အွန်လိုင်းမလာရင် ကျုပ် မနေတတ်ဘူး . ……. ဟေ……… ဟုတ်တယ် . .ဘိန်းစွဲသလို ဖြစ်နေပြီ . ……. ဟေ . ……. ကလေးမ များ ရှိနေမလား ဆိုပြီး ခဏခဏ ၀င်ကြည့်မိတာ မရှိရင် ဝေဒနာဘဲ . ……. ဖြစ်ရလေ . .တကယ် လား . ……. အင်း . .ဟိုတနေ့ က ကျုပ် က ကလေးမ တကိုယ်လုံး ကို နမ်းတယ် ဆိုတော့ ကလေးမ လဲ အရမ်းတုန်လှုပ်တယ် ဆိုတာလေး ပြန် ပြောပြပါ အုံး . …. … ဒီအကြောင်း . .စမလာနဲ့ ကွာ . .ဒီကလဲ တယောက်ထဲ . .စိတ်တွေ လှုပ်ရှားလာရင် မလွယ်ဘူး . ……. ကျုပ်ကလဲ ဒီမှာ တယောက်ထဲ . .အရမ်း တင်းကျပ်နေတယ် . ……. တင်းကျပ်နေရင် ဖြေလျော့လိုက်ပေါ့ . ……. ကလေးမ လျော့ပေးပါလား . ……. ဘယ်လို လျော့ပေးရမှာလဲ . ……. ကလေးမ ရဲ့ လက်ကလေးနဲ့ပေါ့ . ……. ပွတ်ပေးရမှာ လား . ……. အင်း . .ဖွဖွလေး ပွတ်ပေး . ……. ပွတ်ပေးနေတယ် . .သူ့ ကို လျော့ပေး ရင်း သူများလဲ တင်းကျပ်လာတယ် …….. လျော့ပေးရမလား . …… အင်း . ……. ကလေးမ ရဲ့တင်းနေတဲ့ နေရာလေး ကို ကျုပ် နမ်းပေးမယ် . ……. အင်း . ……. ။
ကျုပ် နမ်းပေးတာ ကြိုက်လား . ……. အင်း . ……. စိုနေလား . ……. ဟိတ် သူ ဘယ်လိုသိလဲ . ……. စိုနေတယ် ပေါ့ . .ဟတ်လား . ……. အင်း . ….လှလိုက်တာ ..ကလေးမ ရယ် . ………. ဘာလှတာလဲ . ……. ကလေးမ ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေး . ……. အို . ……. နမ်းပေးမယ်နော် . .ဖွဖွလေး . ….ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ချပ်တင်း လုပ်ရင်း ပေါင်ကြား က သူမ ရဲ့ ဖေါင်းမို့ခုံးကြွနေတဲ့ ရတနာရွှေကြုတ်ကြီးသည် အရမ်း ယားယံ လာ သည် . .။ သူမ ထမိန်ပေါ်ကနေဘဲ ပွတ်နေမိရ သည် . .။တဖက် က ဘလူးလပ်ဗါ လဲ တဖြေးဖြေး ကြမ်းလာ သည် . .။… ကလေးမ . ……. အင် . ……. ကျုပ် အရမ်းထန်နေပြီ . .ကလေးမ ကို ချစ်လို့ ရမလားဟင် . ……. ချစ်လေ . .ချစ်. ……. ကျုပ် ထည့်မယ်နော် . ……. ထည့် . .ထည့် . .အင်း . .ဟင်း . ……. ကောင်းလိုက်တာ ကလေးမ ရယ် . ….ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ပေါင်ကြား က ရတနာရွှေကြုတ်ကြီး စိုစိုရွှဲလာပြီ . ။ ဖိကာဖိကာ ပွတ်မိတော့. .တကိုယ်လုံး တုန် သွားရတဲ့ကာမ လမ်းဆုံး ပန်းတိုင် ကို တက်လှမ်းချင်လာရ သည် . .။… သူ . .ထည့်နေလား ဟင် . ……. အင်း . .ကောင်းလာလား . .မြန်မြန် လုပ်ပေးရတော့မလား . ……. အင်း . ……. ဆောင့်မယ် နော် . ……. အင်း . ……. ကလေးမ ရယ် . .သိပ် ကောင်းတာဘဲ . ……. အင်း . .သူများရောဘဲ . ….ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း တချီ ပြီးသွားရ သည် . .။ … ကလေးမ . .ကလေးမ . ……. ဆောရီး . …… ဘယ် ရောက်သွားတာလဲ . ……. ရေချိုးခန်း ခဏ သွားတာပါ . ……. ကလေးမ ပြီး သွားလား . ……. အင်း . ……. ကျုပ်ရောဘဲ . .တင်းကျပ်နေတာတွေ လျော့သွားတယ်…….ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ညက ဒါတွေ လုပ်နေတာကြောင့် မနက် မှာ အိပ်၇ာ က တော်တော် နဲ့ မထချင် . .။မထနိုင်ဘူး . .။ အို . .ငရဲ ကို ခေါ်ထားတာဘဲ .. ။ ခုမှ သတိရပြီး လူးလဲထပြီး ရေချိုးခန်း ၀င်ရ သည် . .။နာရီနှိုးစက်ကလဲ..မလုပ်မိ. ။ မျက်နှာသစ်..သွားတိုက်လုပ်နေတုံး ..အိမ်ရှေ့တံခါး က … တင်..တောင်. .တင်တောင်. …. ဆိုတဲ့ ဘဲလ်သံ ကြားလိုက်ရသည် . .။ဟား..ငရဲေ၇ာက်နေပြီ ထင်တာဘဲ . .. ။ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ပြေးဆင်းသွားသည် . .။ ဟုတ်ပါသည် . .။ ငရဲပါ . .။… ဟေး . ငရဲ . .တယ်ဝိရိယ ကောင်းပါလား .. မမ လဲ ခုနမှ ထတယ် . . ….ငရဲ က ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ဘလောက်စ် တထပ်ထဲ ၀တ်ထားလို့အထဲကနို့ကြီးတွေ လှုပ်ခါတာ ကိုငေးကြည့်နေသည် ။နို့သီးထိပ်ဖုလေးတွေ က ပိတ်သားပါးပါးမှာ ကပ်နေတော့ အရာလေးတွေမြင်ရတာ စိတ်လှုပ်၇ှားစရာဘဲလေ . .။ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း လဲ ငရဲ သူမ ရင်ဘတ် ကို တပ်မက်တဲ့ မျက်လုံးတွေ နဲ့ ကြည့်တာ တွေ့ သည် .. ။ … လာ..ကော်ဖီ သောက်အုံး . ……. ကျနော် အိမ်နားက လဘက်ရေဆိုင်မှာ သောက်ခဲ့ပြီးပြီ မမ . ……. အို..ထပ်သောက်ပေါ့ . .လာ . .လာ . ….ငရဲ နဲ့ မီးဖိုခန်းမှာ နှစ်ယောက်ထဲမို့ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှားနေသည် . .။ကော်ဖီသောက်ရင်းလဲ သူမ နို့တွေ ကို ငရဲ စိုက်ကြည့်နေသည် . .။သူကြည့်တဲ့ ပုံက အခုဘဲ နို့တွေကိုအတင်း လှန် စို့တော့မဲ့ပုံ . .။ခြံထဲမှာ လုပ်စရာ အလုပ်တွေကို ငရဲ ကို ပြ သည် . .။ ငရဲ သည် ပုဆိုးအဟောင်းတထည် ကို ခပ်တိုတိုဝတ်လိုက်ပြီးသူ့ အပေါ်က တီရှပ် ကို ချွတ် ပစ်လိုက်သည် . .။ငရဲ ရဲ့ တောင့်တင်းသော ကိုယ်လုံး ကိုဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ကြည့်ပြီး စိတ်တွေ ယောက်ရက်ခတ်နေသည် ..။သူမ ဆင်တဲ့ အကွက်ထဲ ၀င်လာ သည် .. ။
ငရဲ ချွေးတွေ စိုရွှဲနေသလို မြေကြီးတွေလဲပေကျံနေတာကြောင့်. . .ရေချိုးခိုင်းလိုက် သည် . .။ ငရဲ အတွက် မျက်နှာသုတ်ပုဝါ နဲ့ ဆပ်ပြာခွက် သူမယူပြီး သွားပို့ပေး သည် .. ။ ငရဲ ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်သွားတော့ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း တဖက် က အပေါက်ကနေချောင်းတော့တာဘဲ . .။ ရေချိုးခန်းထဲမှာ ငရဲကို ကိုယ်တုံးလုံးကြီး တွေ့လိုက်ရတာနဲ့ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်းသည် ကြက်သီးတွေ တဖြန်းဖြန်း ထ ရတော့ သည် .. ။ သူမ ကြားဖူးနေရတဲ့ ငရဲ ရဲ့ လီးတန်ကြီး ကိုသူမ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ . .မြင်လိုက်ရသောကြောင့် ပါဘဲ . . .။ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ပေါင်ကြား က မို့ဖေါင်းခုံးထနေသော အင်္ဂါစပ် ကြီး သည် ကာမ စိတ် ကြောင့် ပိုပြီးဖေါင်းကြွနေပြီ. . ။ ကာမေ၇ှ့ပြေး အရေကြည်တွေ စိုစိုရွှဲနေပြီ . .။ ငရဲ သည် ရေချိုးရင်း . .သူ့ လိင်တန်လီးကြီးကို လက် နဲ့ ဆုတ်ကိုင် ကာ ဆွနေသည် ။ လီးကြီး သည် တန်ကနဲ ထောင်ထ လာ သည် . .။ အို ..တကယ် ကြီးပြီး ရှည်တဲ့ လီးဘဲ . .အို . .ငရဲ ရယ် . .ငရဲကြီးတာ …မမ သိနေပါတယ် . .ကွာ. . . .သူမ ကြည့်နေဆဲ ငရဲ သည် . .အသံထွက်ပြီး . …. မမ ရယ်. . .မမ ကို လိုးချင်တယ် . . …. လို့တိုးတိုးပြောနေရင်း . .သူ့ လီးကို ရှေ့တိုးနောက်ငင် ကွင်းတိုက်နေပြီ . .. ။အို . .သူ ငါ့ကို မှန်းပြီး ကွင်းတိုက်နေပါလား . . .ဒေါ်မီမီခိုင်မင်းသည်..အရေတွေ.စိုစိုရွှဲနေသော..သူမရဲ့ရတနာရွှေကြုတ်ကြီး.ကိုလက်နဲ့..ပွတ်သပ်..ကိုင်တွယ်နေမိရ ပြီ . ..။ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း သည် ငရဲ ရဲ့ လီးကို ကြည့်ပြီး သူမ အင်္ဂါစပ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကိုလက်ချောင်းများနဲ့ ပွတ်ချေနေမိရင်း . .ကာမ စိတ်တွေ ကြွသထက်ကြွလာရ သည် . . .။ငရဲ သည် ကွင်းတိုက်နေရာက ဆက်မတိုက်တော့ဘဲ ရုတ်တရက် မျက်နှာသုတ်ပုဝါကြီးကို အမြန်ခါးမှာပတ်လိုက်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲ က ထွက်လိုက်သည် . .။ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း လဲ ထမိန်ဖြေချွတ်ခါ လက်နဲ့ မိမိ ..ဖါသာ ပွတ်ပြီး အာသာ ဖြေမိနေရာက ငရဲ ခုလို ဗြုံးကနဲ ထွက်လာလို့ ..ထမိန် ကို အမြန် ပြန်ဝတ်ပြီးသည်နေရာ က ပြေးဖို့ ကြံစည်သည် . .။… မမ . .ဘယ်ပြေးမလို့လဲ . ……. မမ . .ဟို . ဟို . ……. မမ ကျနော့်ကို ချောင်းနေတာ သိတယ် . .မမ ကျနော့် ကို မညာပါနဲ့ဗျာ . ….ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း လဲ ရှက်ပြီး ထွက်ပြေးဖို့ လုပ်ပေမဲ့ ငရဲ က သူမ လက် ကို ဖမ်းဆွဲထားလိုက်တာကြောင့်ပြေးလို့ မရဘဲ ငရဲ ကို မျက်နှာချင်းဆိုင်မိနေရ သည် . .။… လာပါ . .မမရယ်. .မမ ကို ကျနော် သဘောကျနေတာ ကြာပါပြီ . .အခု မမ အိမ် မှာ ကျနော် နဲ့ မမဘဲ ရှိတာ . .ချစ်ကြရအောင်ပါ . . …… အို . .ငရဲ . .မင်း . .မင်း . .ဘာတွေ လာပြောနေတာလဲ . .ငါ့ကို ဘယ်လို မိန်းမများအောက်မေ့နေလို့လဲလွှတ် . .လွှတ် . . …ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရှက်ရမ်းရမ်းနေမှန်း ငရဲ က သိပေ သည် . .။
ငရဲ က သူမ ကို အပေါ်ထပ် က သူမအိပ်ခန်းကြီး ထဲ ကို ဆွဲခေါ်သွား သည် . .။… ခက်တော့တာဘဲ ငရဲ ရယ် . .ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲကွာ . ……. ချစ်ပေးမယ်လေ . .မမ ကို ကောင်းကောင်း ချစ်ပေးမလို့ . ……. ငရဲ . .မမ တောင်းပန်ပါတယ် . .လွှတ်ပါ . . ……. နိုး..နိုး . ..မရတော့ဘူး . .ကျနော် သိပ်ထန်နေပြီ …မမ လဲ ထန်နေတာဘဲ မဟုတ်လား ……… အို..မင်း..မင်း..ဘာတွေ ပြောနေတာလဲ..ဘာထန်တာလဲ…..င၇ဲက ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရဲ့ အိပ်ခန်းထဲ က ကုတင်ပေါ်ကို ရောက်နေပြီမို့ သူ ခါးမှာ ပတ်လာသော မျက်နှာသုတ်ပုဝါကို ဖြုတ်လိုက် သည် ..။နံမည်ကြီး စံချိန်မှီ လီးတန်ကြီး ထင်းကနဲ ပေါ်လာသည် ။… မမ ကြောက်တယ်ကွယ်……ငရဲက ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို ချွတ်သည် ..။… ဘာကို ကြောက်တာလဲ..မမ…….. မင်းရဲ့ လက်နက်ကြီး ကိုပေါ့ ……….. မမ နာမှာစိုးလို့လား . . ……. အင်းပေါ့..မင်း ဟာကြီးနဲ့ဆို မမ ဟာ ကွဲသွားနိုင်တယ် . . …… မကွဲစေရပါဘူး……..ပြောပြောဆိုဆို ငရဲ သည် မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းဗလာကိုယ်လုံးတီးဖြစ်နေသောဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ..ကိုပက်လက်အိပ်စေပြီး..သူမရဲ့ပေါင်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးတွေအကြားကိုမျက်နှာအပ်ပြီးသူမရဲ့ရတနာရွှေကြုတ်ကြီးကို..စတင်နမ်းရှုံ့ ပါတော့ သည် . .။ ငရဲ …အို..ငရဲ… .. ဘာ..ဘာတွေ..လုပ်နေတာလဲကွယ်…….ငရဲ သည် ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရဲ့တင်းနေတဲ့နို့ကြီးတွေ ကို သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်ဆုတ်ထားပြီးနို့သီးထိပ်ဖုလေးတွေကို သူ့ လက်မနဲ့လက်ညှိုးကိုသုံးပြီး သာသာလေး ချေပေးနေသည် . .။သူ့လျာကိုအစွမ်းကုန်ထုတ်ပြီး . .စုတ်တံနဲ့ ဆေးသုတ်သလို အပေါ်အောက် စုံချီဆန်ချီ . .ရတနာရွှေကြုတ်ကြီးကိုယက်ပေးလေတော့ရာ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်းမှာ ရေငတ်တုံး ရေတွင်းထဲကျသွားရသည် ဆိုသကဲ့သို့ . .ကာမအရသာထူးကို ရနေပြီမို့ . .ကျေနပ်စွာ ငရဲ ယက်သမျှကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ခံနေပါတော့ သည် . .။ ငရဲ သည် သည် အခွင့်အရေးကို ချောင်းနေတာ ကြာပြီ . .။ အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်ခံသူ မဟုတ်တာကြောင့် ဆာလောင်နေတဲ့ ဒီမန်နေဂျာမ . .သူ့ ကို အိမ်ခေါ်ကထဲ ကအခွင့်အရေးရ ရင် ဗြုန်းပစ်မည် လို့ ဆုံး ဖြတ်ပြီးသား . .။ ပညာစွမ်းတွေ အကုန် ထုတ်သုံးကာ ဒီမမကြီးသူ့ကိုစွဲသွားအောင် လုပ်မည် လို့လဲ သူ ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ သည် မဟုတ်ပါလား . . .။ငရဲ သည် ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရဲ့ ရတနာရွှေကြုတ်ကြိး ကို ရေရေလည်လည်လဲ သဘောကျ သည် . .။ အနံ့ အသက်လဲ မဆိုး . .။ သေသေချာချာ အမြဲ သန့်ရှင်းပုံရ ည် . .။အမွှေးလဲ ပါးထား . .ညှပ်ထား သည် . .။ တော်တော်လတ် တဲ့ မုံ့ပေါင်းကြီး . . .။
တဗွီးဗွီး နဲ့ မှုတ်တာဒေါ်မီမီခိုင်မင်း မှာ ဖင်ကြီးတွေဘယ်ညာရမ်းခါလိုက် ကော့လိုက်နဲ့ သဘောကျနေသည် . .။နှုတ်ဖျားကလဲ . .ငှက်ဖျားဝေဒနာသည်တယောက် အဖျားတက်သလို . .ဟင်းဟင်း . .ဟင်းဟင်း . . နဲ့ညည်းနေသည် .။ငရဲ ရဲ့ ယက်ပေး စုတ်ပေးတာတွေ က အသဲခိုက်အောင် ကောင်းလှ သည် .။ငရဲသည် ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရတနာရွှေကြုတ်အတွင်းထဲကို သူ့ လျာထိပ်နဲ့ထိုးသည် . .။… အို့အို . ..အို့အာ……အာ……ဒေါ်မီမီခိုင်မင်းထွန့်ထွန့်လူးနေသည်. .ငရဲကသူမခါးကနေဆွဲကိုင်ချုပ်ထားလို့..အနောက်ကိုဆုတ်ပြေးလို့မရ. .။သူမ ဖင်တွေ ဗရမ်းဗတာ ရမ်းခါနေ၇ပြီ . .။ … အို . .ငရဲ ရယ်.. . ..တော်…တော်ပါတော့ . . ….ငရဲ က တအားနင်း …ယက်နေသည် . .။ ငရဲ လျာကြီး သူမ အတွင်းထဲ မွှေနေဆဲ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း. .ပြီးသွားရ သည် . .။ ငရဲ . မှုတ်တာ ရပ်လိုက် သည် . .။ အို . .သူ . .သူ . .လိုးဖို့ ကြံနေပြီ . .။ဒေါ်မီမီခိုင်မင်းကိုယ်ပေါ်မှာ နေရာယူနေပြီ . .။ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရဲ့ ပေါင်တန်တွေ ကို သူ တွန်းခွဲလိုက် ပြီး သူ့လီးတန်ကြီး ကို တေ့ကာ ထိုးသွင်းတော့ ..လုံးပတ်တုတ်လှတဲ့ ငရဲ ရဲ့ လီးကြီး . .၀င်လာတာ ဗျိကနဲတင်းကျပ်နေတာမို့ ..သူမ ဟာ ပြဲသွားမှာကို ကြောက်သွားပြီး . …. ငရဲ . .ဖြေးဖြေး..မမဟာကွဲသွားအုံးမယ် လို့ ပြောလိုက်သည် . .။ ငရဲ က … မကွဲပါဘူး..မမရယ်. .မမ အဖုတ် က …အရေတွေတအားရွှဲနေတာ အိုကေပါတယ် . …. လို့ . .ပြောရင်း သူ့လီးတန်ကြီးကို.ဆက်..ထိုးသွင်းလေသည် . .။… အို . .. .အ…အ…အ…ငရဲ . …..ငရဲ ရဲ့ လီးကြီး တဆုံး ၀င်သွား သည် . .။ ငရဲ ရဲ့ ဆီးခုံ နဲ့ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း အထိ ဘဲ . .။အို . .သူ့အတန်ကြီးတခုလူံး ငါ့အထဲ အောင်းနေပြီ . .ဆိုတဲ့ အတွေးက ကြက်သီးတွေ ထစေ သည် . .။ ငရဲ ကနို့တွေ ကို ဘယ်ညာပြောင်းပြီး စို့နေသည် .. ။… ငရဲ . ……. မင်း . .မမ နဲ့ မင်းအကြောင်း ဘယ်သူ့ မှ မြေ့ပာနဲ့ နော် . ……. စိတ်ချပါ မမ ရယ် . .မမ က ကျနော့် ကို ခုလိုဘဲ ပေးလိုး မယ် မဟုတ်လား . ……. အင်း . ….ငရဲ ရဲ့ လီးကြီး စ လှုပ်ရှားလာပြီ .. ။တကယ့်ကို ထိတာ . .။ တချို့မိန်းမ တွေ က လီး ကြီးကြီး သေးသေး ဂရုမစိုက်ဘူး . .ကြာကြာပြီးအောင်မ လိုးနိုင်ဖို့ဘဲ လိုတယ် လို့ ပြောကြပေမဲ့ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ကတော့ ငရဲ လို လီးကြီးကြီး နဲ့အလိုးခံရတာကို ပိုပြီး ကြိုက် ပါသည် . .။သူမ ဟာအတွင်းထဲမှာ ပြည့်ကျပ်နေတာကြောင့် သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်တိုင်း ..အတွင်းနံရံ တွေ ကိုပွတ်တိုက်မှူက ပြင်းထန်တာကြောင့် တကိုယ်လုံး တုန်ခါနေရလောက် အောင်ဘဲ ..ကာမ အရသာတွေတင်ပြည့်ကျပ်ပြည့် ရရှိရတာမို့ . .ငရဲ ရဲ့ လီးတန်ကြီး ကို နှစ်ခြိုက်စွဲလန်း မိပေ သည် . .။
ငရဲ သည် အစမှာ ဖြေးဖြေး လိုးထည့်နေရာက အရှိန်ရလာတော့ ခပ်သွက်သွက်လိုးဆောင့်လာ သည် . .။ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း က ဘာမှ မပြောဘဲ မျက်လုံးစုံမှိတ်ခါ . .ခံနေလို့ ငရဲ သည်ခပ် ပြင်းပြင်း ဆောင့်ဆောင့် လိုးလေ သည် . .။ အင့် . .အင့် . ..ငရဲ..ငရဲ . ..ဘာဖြစ်လဲမမ ..နာလို့လား . .ဟင့်အင်း . .ထိ…ထိလို့ . . .ရတယ် . .ဆောင့်..ဆောင့် . .. ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရဲ့ ဖင်တွေ ဘယ်ညယလူးနေ သည် . .။ ဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲ . .ကော့ပင့်ပေးလာ သည် . .။ ငရဲ က ဆောင့်တဲ့ အချိန် နဲ့ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း က ပင့်ပေးတဲ့ အချိန် နဲ့ . .ဆုံ မိတတ် သည် . .။ အိုး . .အား…နဲ့ ကာမ အရသာထူးရသွားပြီး ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း . .အောက်မှ တအား ကော့ပေးနေသည် . .။… ဆောင့် ဆောင့်ဆောင့်…..ဆောင့်ပါ . .ငရဲလေး . .ဆောင့်ပါ နာနာ . .ကွဲချင်ကွဲသွားပါစေ. .ဆောင့်ပါတော့ . .ကြုံးဆောင့်ပါတော့…အီး…အီ…….ကာမ အရှိန်တက်လာတော့ သွေးရူးသွေးတန်း ပြောချင်ရာ ထွက်ချင်ရာတွေ ပြောထွက်နေပြီ . .။… ကောင်းလားဟင် . .မမ … … အင်..အင်. .ကောင်း . .ကောင်း . .ကောင်း တယ် . . …. … မမ စောက်ပတ်လဲ သိပ်ကောင်းတယ် . .မမစောက်ပတ် ကြိုက်တယ် . ……. ဆောင့်ငရဲ . .မမ..မမ..မမလေ . .မမ အို . .ပြီးတော့မယ် . . .လိုး . .လိုး . . ….ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း မရှက်တော့ . .လိုး . .လိုး . . ပါ . .တအား . .လိုးပါ . .လို့ တောင်းဆိုနေတော့သည် .. ။ငရဲ သည် အားကုန်ကြုံးကာ လိုးပေးနေသည် . .။ တဖမ်းဖမ်း . .အသားချင်းထိတွေ့သံတွေ. .တဘွတ်ဘွတ် အသံတွေ . .ဆူညံနေ သည် . .။ … အို . .အို . .. ကောင်း . .ကောင်း . .ပြီ. .. . .ငရဲ ရယ် . . .မမ . ..မမ . ..ကောင်းလိုက်တာ . . ….ကာမ ပန်းတိုင် ကို တက်လှမ်း ရောက်၇ှိသွား သည် . .။ ဒ်ါမီမီခိုင်မင်း ။ သောကြာနေ့ ည . .။ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ဥာဏ်များနေသည် . .။ သူမ သည် သတင်းကြားထားသော ငရဲလီးကြီးတာ ကို အတည်ပြုချင်သည်. .။ သူမ မျက်စိ နဲ့ ကိုယ်တိုင် တွေ့ချင် သည် .. ။ ထို့ကြောင့် ဥာဏ်များနေတာ ဖြစ်သည် ။ဘယ်လိုဥာဏ်များနေသလဲဆိုတော့ . .။မနက်ဖန် ငရဲကို ခြံထဲ မြေတွင်းတူးရန် .အကူ ခေါ်ထား သည် .. ။ ပြီးရင် ငရဲ ကိုယ်မှာပေကျံတာတွေကို အကြောင်းပြုပြီး ငရဲကို သူမ အိမ်အောက်ထပ် က ရေချိုးခန်းမှာ ရေချိုးခိုင်းမည် . .။ခုညထဲက ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း သည် အဲဒီ ရေချိုးခန်းမှာ အပေါက်ငယ်တခု ကို ဖေါက်ထား ပါ သည် . .။ငရဲရေချိုးမဲ့နေရာ ကို မြင်သာမဲ့ ချောင်းဖို့ အပေါက် ဖေါက်ထားလိုက် သည် . .။အင်း . .ငရဲ ရဲ့ လီးတုတ်တုတ်ကြီး ကို တွေ့ရချည်သေးရဲ့ . .။ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း သောကြာနေ့ ညလဲဖြစ်တော့ မနက် စောစော ထစရာမလိုလို့ အွန်လိုင်း မှာ စာဖတ်လိုက် အပြာဆိုက် ကိုသွား ပြီး လီးတန်ကြီးတွေ ကို ကြည့်လိုက် နဲ့ လုပ်ရာ ကသောကြာ နဲ့ စနေ တိုင်း သူ နဲ့ ချပ်တင်း လုပ်နေကျ ဘလူး လပ်ဗါ ဘလူး လပ်ဗါ ဆိုတဲ့တယောက် များ ရောက်နေပြီလား ဆိုပြီး သွားကြည့် လိုက် သည် .. ။
ဘလူး လပ်ဗာ ရှိနေသည် . .။ဘလူးလပ်ဗါ က စင်ကာပူ က တဲ့ . .။ အိုင်တီ တက်ကနစ်ရှင် တဲ့ . .။ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရဲ့ချပ်တင်းလုပ်တဲ့ နံမည် က ရန်ကုန်ဂဲစ် …။သည် နံမည် ယူထားတာ ဘယ်သူမှ မသိဘူး . .။ သူမ အိမ် ကွန်ပြူတာ နဲ့ တယောက်ထဲ ရှိတဲ့အခါညပိုင်း သူမ ချပ်တင်း လုပ်တဲ့ အခါ သုံးတာ ဖြစ် သည် . .။ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း လှမ်း နုတ်ဆက်လိုက် သည် .. ။ … ဘယ်လိုလဲ . .နေကောင်းလား . . … … ကောင်းပါ့ဗျာ . .ကလေးမေ၇ာ . …. … ကောင်းပါ့ ရှင် . .ရောက်နေတာ ကြာပြီလား . …. … မကြာသေးပါဘူး . …. … ဘာထူးသေးလဲ . .ရီးစား ရပြီလား . …. … ဟင့်အင်း . .မရသေးဘူး . …. … မရှာဘူးလား . …. … ရန်ကုန်မှာ လာရှာမလို့ . …. … ရှာလေ . .သိပ်မှ မဝေးတာ . .လာချင်ရင် အနီးလေး . …. … ကလေးမ က ကူညီမှာ လား . …. … ဘာကို ကူညီရမှာလဲ . …. … ရီးစား ရှာဖို့လေ . ……. ဘယ်လို ကူရမှာလဲ . ……. ရီးစား ရဖို့လေ . …. … သူ့ ဟာ သူ လုပ်ရမဲ့ ကိစ္စဘဲ လေ . ……. ကလေးမ နဲ့ တွေ့ချင်တာ .. …… ဟုတ်လို့လား . ……. ဟုတ်တယ် . .တွေ့ချင်တာ အရမ်းဘဲ . ……. တကယ်လား . ……. အင်း . .ကလေးမ အွန်လိုင်းမလာရင် ကျုပ် မနေတတ်ဘူး . ……. ဟေ……… ဟုတ်တယ် . .ဘိန်းစွဲသလို ဖြစ်နေပြီ . ……. ဟေ . ……. ကလေးမ များ ရှိနေမလား ဆိုပြီး ခဏခဏ ၀င်ကြည့်မိတာ မရှိရင် ဝေဒနာဘဲ . ……. ဖြစ်ရလေ . .တကယ် လား . ……. အင်း . .ဟိုတနေ့ က ကျုပ် က ကလေးမ တကိုယ်လုံး ကို နမ်းတယ် ဆိုတော့ ကလေးမ လဲ အရမ်းတုန်လှုပ်တယ် ဆိုတာလေး ပြန် ပြောပြပါ အုံး . ……. ဒီအကြောင်း . .စမလာနဲ့ ကွာ . .ဒီကလဲ တယောက်ထဲ . .စိတ်တွေ လှုပ်ရှားလာရင် မလွယ်ဘူး . ……. ကျုပ်ကလဲ ဒီမှာ တယောက်ထဲ . .အရမ်း တင်းကျပ်နေတယ် . ……. တင်းကျပ်နေရင် ဖြေလျော့လိုက်ပေါ့ . ……. ကလေးမ လျော့ပေးပါလား . ……. ဘယ်လို လျော့ပေးရမှာလဲ . ……. ကလေးမ ရဲ့ လက်ကလေးနဲ့ပေါ့ . …. … ပွတ်ပေးရမှာ လား . ……. အင်း . .ဖွဖွလေး ပွတ်ပေး . ……. ပွတ်ပေးနေတယ် . .သူ့ ကို လျော့ပေး ရင်း သူများလဲ တင်းကျပ်လာတယ် …….. လျော့ပေးရမလား . …… အင်း . ……. ကလေးမ ရဲ့တင်းနေတဲ့ နေရာလေး ကို ကျုပ် နမ်းပေးမယ် . ……. အင်း . ……. ကျုပ် နမ်းပေးတာ ကြိုက်လား . ……. အင်း . ……. စိုနေလား . ……. ဟိတ် သူ ဘယ်လိုသိလဲ . ……. စိုနေတယ် ပေါ့ . .ဟတ်လား . ……. အင်း . ….လှလိုက်တာ ..ကလေးမ ရယ် . ………. ဘာလှတာလဲ . ……. ကလေးမ ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေး . ……. အို . ……. နမ်းပေးမယ်နော် . .ဖွဖွလေး . ….ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ချပ်တင်း လုပ်ရင်း ပေါင်ကြား က သူမ ရဲ့ ဖေါင်းမို့ခုံးကြွနေတဲ့ ရတနာရွှေကြုတ်ကြီးသည် အရမ်း ယားယံ လာ သည် . .။ သူမ ထမိန်ပေါ်ကနေဘဲ ပွတ်နေမိရ သည် . .။တဖက် က ဘလူးလပ်ဗါ လဲ တဖြေးဖြေး ကြမ်းလာ သည် . .။… ကလေးမ . ……. အင် . ……. ကျုပ် အရမ်းထန်နေပြီ . .ကလေးမ ကို ချစ်လို့ ရမလားဟင် . ……. ချစ်လေ . .ချစ်. ……. ကျုပ် ထည့်မယ်နော် . ……. ထည့် . .ထည့် . .အင်း . .ဟင်း . ……. ကောင်းလိုက်တာ ကလေးမ ရယ် . ….ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ပေါင်ကြား က ရတနာရွှေကြုတ်ကြီး စိုစိုရွှဲလာပြီ . ။ ဖိကာဖိကာ ပွတ်မိတော့. .တကိုယ်လုံး တုန် သွားရတဲ့ကာမ လမ်းဆုံး ပန်းတိုင် ကို တက်လှမ်းချင်လာရ သည် . .။
သူ . .ထည့်နေလား ဟင် . ……. အင်း . .ကောင်းလာလား . .မြန်မြန် လုပ်ပေးရတော့မလား . ……. အင်း . ……. ဆောင့်မယ် နော် . ……. အင်း . ……. ကလေးမ ရယ် . .သိပ် ကောင်းတာဘဲ . ……. အင်း . .သူများရောဘဲ . ….ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း တချီ ပြီးသွားရ သည် . .။… ကလေးမ . .ကလေးမ . ……. ဆောရီး . …… ဘယ် ရောက်သွားတာလဲ . ……. ရေချိုးခန်း ခဏ သွားတာပါ . ……. ကလေးမ ပြီး သွားလား . ……. အင်း . ……. ကျုပ်ရောဘဲ . .တင်းကျပ်နေတာတွေ လျော့သွားတယ်…….ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ညက ဒါတွေ လုပ်နေတာကြောင့် မနက် မှာ အိပ်၇ာ က တော်တော် နဲ့ မထချင် . .။မထနိုင်ဘူး . .။ အို . .ငရဲ ကို ခေါ်ထားတာဘဲ .. ။ ခုမှ သတိရပြီး လူးလဲထပြီး ရေချိုးခန်း ၀င်ရ သည် . .။နာရီနှိုးစက်ကလဲ..မလုပ်မိ. ။ မျက်နှာသစ်..သွားတိုက်လုပ်နေတုံး ..အိမ်ရှေ့တံခါး က … တင်..တောင်. .တင်တောင်. …. ဆိုတဲ့ ဘဲလ်သံ ကြားလိုက်ရသည် . .။ဟား..ငရဲေ၇ာက်နေပြီ ထင်တာဘဲ . .. ။ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ပြေးဆင်းသွားသည် . .။ ဟုတ်ပါသည် . .။ ငရဲပါ . .။ … ဟေး . ငရဲ . .တယ်ဝိရိယ ကောင်းပါလား .. မမ လဲ ခုနမှ ထတယ် . . ….ငရဲ က ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ဘလောက်စ် တထပ်ထဲ ၀တ်ထားလို့အထဲကနို့ကြီးတွေ လှုပ်ခါတာ ကိုငေးကြည့်နေသည် ။နို့သီးထိပ်ဖုလေးတွေ က ပိတ်သားပါးပါးမှာ ကပ်နေတော့ အရာလေးတွေမြင်ရတာ စိတ်လှုပ်၇ှားစရာဘဲလေ . .။ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း လဲ ငရဲ သူမ ရင်ဘတ် ကို တပ်မက်တဲ့ မျက်လုံးတွေ နဲ့ ကြည့်တာ တွေ့ သည် .. ။… လာ..ကော်ဖီ သောက်အုံး . ……. ကျနော် အိမ်နားက လဘက်ရေဆိုင်မှာ သောက်ခဲ့ပြီးပြီ မမ . ……. အို..ထပ်သောက်ပေါ့ . .လာ . .လာ . ….ငရဲ နဲ့ မီးဖိုခန်းမှာ နှစ်ယောက်ထဲမို့ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှားနေသည် . .။ကော်ဖီသောက်ရင်းလဲ သူမ နို့တွေ ကို ငရဲ စိုက်ကြည့်နေသည် . .။သူကြည့်တဲ့ ပုံက အခုဘဲ နို့တွေကိုအတင်း လှန် စို့တော့မဲ့ပုံ . .။ခြံထဲမှာ လုပ်စရာ အလုပ်တွေကို ငရဲ ကို ပြ သည် . .။ ငရဲ သည် ပုဆိုးအဟောင်းတထည် ကို ခပ်တိုတိုဝတ်လိုက်ပြီးသူ့ အပေါ်က တီရှပ် ကို ချွတ် ပစ်လိုက်သည် . .။ငရဲ ရဲ့ တောင့်တင်းသော ကိုယ်လုံး ကိုဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ကြည့်ပြီး စိတ်တွေ ယောက်ရက်ခတ်နေသည် ..။သူမ ဆင်တဲ့ အကွက်ထဲ ၀င်လာ သည် .. ။ ငရဲ ချွေးတွေ စိုရွှဲနေသလို မြေကြီးတွေလဲပေကျံနေတာကြောင့်. . .ရေချိုးခိုင်းလိုက် သည် . .။ ငရဲ အတွက် မျက်နှာသုတ်ပုဝါ နဲ့ ဆပ်ပြာခွက် သူမယူပြီး သွားပို့ပေး သည် .. ။ ငရဲ ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်သွားတော့ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း တဖက် က အပေါက်ကနေချောင်းတော့တာဘဲ . .။ ရေချိုးခန်းထဲမှာ ငရဲကို ကိုယ်တုံးလုံးကြီး တွေ့လိုက်ရတာနဲ့ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်းသည် ကြက်သီးတွေ တဖြန်းဖြန်း ထ ရတော့ သည် .. ။ သူမ ကြားဖူးနေရတဲ့ ငရဲ ရဲ့ လီးတန်ကြီး ကိုသူမ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ . .မြင်လိုက်ရသောကြောင့် ပါဘဲ . . .။ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ပေါင်ကြား က မို့ဖေါင်းခုံးထနေသော အင်္ဂါစပ် ကြီး သည် ကာမ စိတ် ကြောင့် ပိုပြီးဖေါင်းကြွနေပြီ. . ။ ကာမေ၇ှ့ပြေး အရေကြည်တွေ စိုစိုရွှဲနေပြီ . .။ ငရဲ သည် ရေချိုးရင်း . .သူ့ လိင်တန်လီးကြီးကို လက် နဲ့ ဆုတ်ကိုင် ကာ ဆွနေသည် ။
လီးကြီး သည် တန်ကနဲ ထောင်ထ လာ သည် . .။ အို ..တကယ် ကြီးပြီး ရှည်တဲ့ လီးဘဲ . .အို . .ငရဲ ရယ် . .ငရဲကြီးတာ …မမ သိနေပါတယ် . .ကွာ. . . .သူမ ကြည့်နေဆဲ ငရဲ သည် . .အသံထွက်ပြီး . …. မမ ရယ်. . .မမ ကို လိုးချင်တယ် . . …. လို့တိုးတိုးပြောနေရင်း . .သူ့ လီးကို ရှေ့တိုးနောက်ငင် ကွင်းတိုက်နေပြီ . .. ။အို . .သူ ငါ့ကို မှန်းပြီး ကွင်းတိုက်နေပါလား . . .ဒေါ်မီမီခိုင်မင်းသည်..အရေတွေ.စိုစိုရွှဲနေသော..သူမရဲ့ရတနာရွှေကြုတ်ကြီး.ကိုလက်နဲ့..ပွတ်သပ်..ကိုင်တွယ်နေမိရ ပြီ . ..။ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း သည် ငရဲ ရဲ့ လီးကို ကြည့်ပြီး သူမ အင်္ဂါစပ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကိုလက်ချောင်းများနဲ့ ပွတ်ချေနေမိရင်း . .ကာမ စိတ်တွေ ကြွသထက်ကြွလာရ သည် . . .။ငရဲ သည် ကွင်းတိုက်နေရာက ဆက်မတိုက်တော့ဘဲ ရုတ်တရက် မျက်နှာသုတ်ပုဝါကြီးကို အမြန်ခါးမှာပတ်လိုက်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲ က ထွက်လိုက်သည် . .။ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း လဲ ထမိန်ဖြေချွတ်ခါ လက်နဲ့ မိမိ ..ဖါသာ ပွတ်ပြီး အာသာ ဖြေမိနေရာက ငရဲ ခုလို ဗြုံးကနဲ ထွက်လာလို့ ..ထမိန် ကို အမြန် ပြန်ဝတ်ပြီးသည်နေရာ က ပြေးဖို့ ကြံစည်သည် . .။… မမ . .ဘယ်ပြေးမလို့လဲ . ……. မမ . .ဟို . ဟို . ……. မမ ကျနော့်ကို ချောင်းနေတာ သိတယ် . .မမ ကျနော့် ကို မညာပါနဲ့ဗျာ . ….ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း လဲ ရှက်ပြီး ထွက်ပြေးဖို့ လုပ်ပေမဲ့ ငရဲ က သူမ လက် ကို ဖမ်းဆွဲထားလိုက်တာကြောင့်ပြေးလို့ မရဘဲ ငရဲ ကို မျက်နှာချင်းဆိုင်မိနေရ သည် . .။… လာပါ . .မမရယ်. .မမ ကို ကျနော် သဘောကျနေတာ ကြာပါပြီ . .အခု မမ အိမ် မှာ ကျနော် နဲ့ မမဘဲ ရှိတာ . .ချစ်ကြရအောင်ပါ . . …… အို . .ငရဲ . .မင်း . .မင်း . .ဘာတွေ လာပြောနေတာလဲ . .ငါ့ကို ဘယ်လို မိန်းမများအောက်မေ့နေလို့လဲလွှတ် . .လွှတ် . . …ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရှက်ရမ်းရမ်းနေမှန်း ငရဲ က သိပေ သည် . .။ ငရဲ က သူမ ကို အပေါ်ထပ် က သူမအိပ်ခန်းကြီး ထဲ ကို ဆွဲခေါ်သွား သည် . .။ … ခက်တော့တာဘဲ ငရဲ ရယ် . .ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲကွာ . ……. ချစ်ပေးမယ်လေ . .မမ ကို ကောင်းကောင်း ချစ်ပေးမလို့ . ……. ငရဲ . .မမ တောင်းပန်ပါတယ် . .လွှတ်ပါ . . ……. နိုး..နိုး . ..မရတော့ဘူး . .ကျနော် သိပ်ထန်နေပြီ …မမ လဲ ထန်နေတာဘဲ မဟုတ်လား ……… အို..မင်း..မင်း..ဘာတွေ ပြောနေတာလဲ..ဘာထန်တာလဲ…..င၇ဲက ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရဲ့ အိပ်ခန်းထဲ က ကုတင်ပေါ်ကို ရောက်နေပြီမို့ သူ ခါးမှာ ပတ်လာသော မျက်နှာသုတ်ပုဝါကို ဖြုတ်လိုက် သည် ..။နံမည်ကြီး စံချိန်မှီ လီးတန်ကြီး ထင်းကနဲ ပေါ်လာသည် ။… မမ ကြောက်တယ်ကွယ်……ငရဲက ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို ချွတ်သည် ..။… ဘာကို ကြောက်တာလဲ..မမ…….. မင်းရဲ့ လက်နက်ကြီး ကိုပေါ့ ……….. မမ နာမှာစိုးလို့လား . . ……. အင်းပေါ့..မင်း ဟာကြီးနဲ့ဆို မမ ဟာ ကွဲသွားနိုင်တယ် . . …… မကွဲစေရပါဘူး……..ပြောပြောဆိုဆို ငရဲ သည် မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းဗလာကိုယ်လုံးတီးဖြစ်နေသောဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ..ကိုပက်လက်အိပ်စေပြီး..သူမရဲ့ပေါင်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးတွေအကြားကိုမျက်နှာအပ်ပြီးသူမရဲ့ရတနာရွှေကြုတ်ကြီးကို..စတင်နမ်းရှုံ့ ပါတော့ သည် . .။ ငရဲ …အို..ငရဲ… .. ဘာ..ဘာတွေ..လုပ်နေတာလဲကွယ်…….ငရဲ သည် ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရဲ့တင်းနေတဲ့နို့ကြီးတွေ ကို သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်ဆုတ်ထားပြီးနို့သီးထိပ်ဖုလေးတွေကို သူ့ လက်မနဲ့လက်ညှိုးကိုသုံးပြီး သာသာလေး ချေပေးနေသည် . .။သူ့လျာကိုအစွမ်းကုန်ထုတ်ပြီး . .စုတ်တံနဲ့ ဆေးသုတ်သလို အပေါ်အောက် စုံချီဆန်ချီ . .ရတနာရွှေကြုတ်ကြီးကိုယက်ပေးလေတော့ရာ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်းမှာ ရေငတ်တုံး ရေတွင်းထဲကျသွားရသည် ဆိုသကဲ့သို့ . .ကာမအရသာထူးကို ရနေပြီမို့ . .ကျေနပ်စွာ ငရဲ ယက်သမျှကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ခံနေပါတော့ သည် . .။
ငရဲ သည် သည် အခွင့်အရေးကို ချောင်းနေတာ ကြာပြီ . .။ အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်ခံသူ မဟုတ်တာကြောင့် ဆာလောင်နေတဲ့ ဒီမန်နေဂျာမ . .သူ့ ကို အိမ်ခေါ်ကထဲ ကအခွင့်အရေးရ ရင် ဗြုန်းပစ်မည် လို့ ဆုံး ဖြတ်ပြီးသား . .။ ပညာစွမ်းတွေ အကုန် ထုတ်သုံးကာ ဒီမမကြီးသူ့ကိုစွဲသွားအောင် လုပ်မည် လို့လဲ သူ ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ သည် မဟုတ်ပါလား . . .။ငရဲ သည် ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရဲ့ ရတနာရွှေကြုတ်ကြိး ကို ရေရေလည်လည်လဲ သဘောကျ သည် . .။ အနံ့ အသက်လဲ မဆိုး . .။ သေသေချာချာ အမြဲ သန့်ရှင်းပုံရ ည် . .။အမွှေးလဲ ပါးထား . .ညှပ်ထား သည် . .။ တော်တော်လတ် တဲ့ မုံ့ပေါင်းကြီး . . .။ တဗွီးဗွီး နဲ့ မှုတ်တာဒေါ်မီမီခိုင်မင်း မှာ ဖင်ကြီးတွေဘယ်ညာရမ်းခါလိုက် ကော့လိုက်နဲ့ သဘောကျနေသည် . .။နှုတ်ဖျားကလဲ . .ငှက်ဖျားဝေဒနာသည်တယောက် အဖျားတက်သလို . .ဟင်းဟင်း . .ဟင်းဟင်း . . နဲ့ညည်းနေသည် .။ငရဲ ရဲ့ ယက်ပေး စုတ်ပေးတာတွေ က အသဲခိုက်အောင် ကောင်းလှ သည် .။ငရဲသည် ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရတနာရွှေကြုတ်အတွင်းထဲကို သူ့ လျာထိပ်နဲ့ထိုးသည် . .။… အို့အို . ..အို့အာ……အာ……ဒေါ်မီမီခိုင်မင်းထွန့်ထွန့်လူးနေသည်. .ငရဲကသူမခါးကနေဆွဲကိုင်ချုပ်ထားလို့..အနောက်ကိုဆုတ်ပြေးလို့မရ. .။သူမ ဖင်တွေ ဗရမ်းဗတာ ရမ်းခါနေ၇ပြီ . .။ … အို . .ငရဲ ရယ်.. . ..တော်…တော်ပါတော့ . . ….ငရဲ က တအားနင်း …ယက်နေသည် . .။ ငရဲ လျာကြီး သူမ အတွင်းထဲ မွှေနေဆဲ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း. .ပြီးသွားရ သည် . .။ ငရဲ . မှုတ်တာ ရပ်လိုက် သည် . .။ အို . .သူ . .သူ . .လိုးဖို့ ကြံနေပြီ . .။ဒေါ်မီမီခိုင်မင်းကိုယ်ပေါ်မှာ နေရာယူနေပြီ . .။ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရဲ့ ပေါင်တန်တွေ ကို သူ တွန်းခွဲလိုက် ပြီး သူ့လီးတန်ကြီး ကို တေ့ကာ ထိုးသွင်းတော့ ..လုံးပတ်တုတ်လှတဲ့ ငရဲ ရဲ့ လီးကြီး . .၀င်လာတာ ဗျိကနဲတင်းကျပ်နေတာမို့ ..သူမ ဟာ ပြဲသွားမှာကို ကြောက်သွားပြီး . …. ငရဲ . .ဖြေးဖြေး..မမဟာကွဲသွားအုံးမယ် လို့ ပြောလိုက်သည် . .။ ငရဲ က … မကွဲပါဘူး..မမရယ်. .မမ အဖုတ် က …အရေတွေတအားရွှဲနေတာ အိုကေပါတယ် . …. လို့ . .ပြောရင်း သူ့လီးတန်ကြီးကို.ဆက်..ထိုးသွင်းလေသည် . .။… အို . .. .အ…အ…အ…ငရဲ . …..ငရဲ ရဲ့ လီးကြီး တဆုံး ၀င်သွား သည် . .။ ငရဲ ရဲ့ ဆီးခုံ နဲ့ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း အထိ ဘဲ . .။အို . .သူ့အတန်ကြီးတခုလူံး ငါ့အထဲ အောင်းနေပြီ . .ဆိုတဲ့ အတွေးက ကြက်သီးတွေ ထစေ သည် . .။ ငရဲ ကနို့တွေ ကို ဘယ်ညာပြောင်းပြီး စို့နေသည် .. ။… ငရဲ . ……. မင်း . .မမ နဲ့ မင်းအကြောင်း ဘယ်သူ့ မှ မြေ့ပာနဲ့ နော် . ……. စိတ်ချပါ မမ ရယ် . .မမ က ကျနော့် ကို ခုလိုဘဲ ပေးလိုး မယ် မဟုတ်လား . ……. အင်း . ….ငရဲ ရဲ့ လီးကြီး စ လှုပ်ရှားလာပြီ .. ။တကယ့်ကို ထိတာ . .။ တချို့မိန်းမ တွေ က လီး ကြီးကြီး သေးသေး ဂရုမစိုက်ဘူး . .ကြာကြာပြီးအောင်မ လိုးနိုင်ဖို့ဘဲ လိုတယ် လို့ ပြောကြပေမဲ့ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ကတော့ ငရဲ လို လီးကြီးကြီး နဲ့အလိုးခံရတာကို ပိုပြီး ကြိုက် ပါသည် . .။သူမ ဟာအတွင်းထဲမှာ ပြည့်ကျပ်နေတာကြောင့် သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်တိုင်း ..အတွင်းနံရံ တွေ ကိုပွတ်တိုက်မှူက ပြင်းထန်တာကြောင့် တကိုယ်လုံး တုန်ခါနေရလောက် အောင်ဘဲ ..ကာမ အရသာတွေတင်ပြည့်ကျပ်ပြည့် ရရှိရတာမို့ . .ငရဲ ရဲ့ လီးတန်ကြီး ကို နှစ်ခြိုက်စွဲလန်း မိပေ သည် . .။ငရဲ သည် အစမှာ ဖြေးဖြေး လိုးထည့်နေရာက အရှိန်ရလာတော့ ခပ်သွက်သွက်လိုးဆောင့်လာ သည် . .။
ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း က ဘာမှ မပြောဘဲ မျက်လုံးစုံမှိတ်ခါ . .ခံနေလို့ ငရဲ သည်ခပ် ပြင်းပြင်း ဆောင့်ဆောင့် လိုးလေ သည် . .။ အင့် . .အင့် . ..ငရဲ..ငရဲ . ..ဘာဖြစ်လဲမမ ..နာလို့လား . .ဟင့်အင်း . .ထိ…ထိလို့ . . .ရတယ် . .ဆောင့်..ဆောင့် . .. ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရဲ့ ဖင်တွေ ဘယ်ညယလူးနေ သည် . .။ ဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲ . .ကော့ပင့်ပေးလာ သည် . .။ ငရဲ က ဆောင့်တဲ့ အချိန် နဲ့ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း က ပင့်ပေးတဲ့ အချိန် နဲ့ . .ဆုံ မိတတ် သည် . .။အိုး . .အား…နဲ့ ကာမ အရသာထူးရသွားပြီး ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း . .အောက်မှ တအား ကော့ပေးနေသည် . .။… ဆောင့် ဆောင့်ဆောင့်…..ဆောင့်ပါ . .ငရဲလေး . .ဆောင့်ပါ နာနာ . .ကွဲချင်ကွဲသွားပါစေ. .ဆောင့်ပါတော့ . .ကြုံးဆောင့်ပါတော့…အီး…အီ…….ကာမ အရှိန်တက်လာတော့ သွေးရူးသွေးတန်း ပြောချင်ရာ ထွက်ချင်ရာတွေ ပြောထွက်နေပြီ . .။… ကောင်းလားဟင် . .မမ … … အင်..အင်. .ကောင်း . .ကောင်း . .ကောင်း တယ် . . …. … မမ စောက်ပတ်လဲ သိပ်ကောင်းတယ် . .မမစောက်ပတ် ကြိုက်တယ် . ……. ဆောင့်ငရဲ . .မမ..မမ..မမလေ . .မမ အို . .ပြီးတော့မယ် . . .လိုး . .လိုး . . ….ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း မရှက်တော့ . .လိုး . .လိုး . . ပါ . .တအား . .လိုးပါ . .လို့ တောင်းဆိုနေတော့သည် .. ။ ငရဲ သည် အားကုန်ကြုံးကာ လိုးပေးနေသည် . .။ တဖမ်းဖမ်း . .အသားချင်းထိတွေ့သံတွေ. .တဘွတ်ဘွတ် အသံတွေ . .ဆူညံနေ သည် . .။ … အို . .အို . .. ကောင်း . .ကောင်း . .ပြီ. .. . .ငရဲ ရယ် . . .မမ . ..မမ . ..ကောင်းလိုက်တာ . . ….ကာမ ပန်းတိုင် ကို တက်လှမ်း ရောက်၇ှိသွား သည် . .။ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း . .ကော့လန် ကာ ခေါင်းအုံးတွေကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုတ်လိန်ရင်း . ..ပြီး သွားရ သည် . ..။ငရဲ သည် နဂိုထဲက ပြီးချင်နေတာပါ . .မမဒေါ်မီမီခိုင်မင်း….ပီးအောင်..ဆွဲလိုးပေးနေတာသာဖြစ်လို့. . .ဒေါ် မီမိခိုင်မင်း လဲ ပြီးရော . .သူလဲ ..ပြီးလိုက်လေ သည် . .။ သုတ်တွေ ဒလဟော. .ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရဲ့ ရတနာရွှေကြုတ်ကြီးထဲ ပန်းထုတ် ကာ ကာမ အရသာထူး ၇ရှိသွားရပြီး . တကိုယ်လုံးကျင်တက် ပြီး . .. ပြီးသွားပါ သည် . .။… ကောင်းလိုက်တာ မမ ရယ် . . .အရမ်.း ဘဲ ကောင်းတယ် . . …… မမရောဘဲ . .မမလေ . .ငရဲ ကြီးတာ ကို ဟိုး အစောကြီးထဲက သိနေတာ . .သိလား . . …. ပြီးပါပြီ။